Public Health in Myanmar: ကိုယ်ဝန်မဟုတ်တဲ့ ဗိုက်ထဲကအလုံး Ovarian Cyst
i want to know what is IUCD?
IUCD = Intra-Uterine Contraceptive Device ကိုယ်ဝန်မရှိစေရန် သားအိမ်ထဲ အစ္စည်းထည့်ထားခြင်း။ Loop, ParaGard (copper T), Mirena (LNG-IUS), Multiload CU375 စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ကျွန်တော့်မိန်းမမှာ ကိုဝန်၃လလောက်ရှိနေပါတယ်...နောက်ပြီးဆရာပြောတဲ့ Ovarian Cyst ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆရာ၊ဘယ်ဘက်ခြမ်းဝမ်းဗိုက်အောက်နားမှာအလုံးတစ်လုံး တွေ့ရပါတယ်ဆရာ...Ultrasound ရိုက်ကြည့်တော့7.7x3.8 လောက်ရှိတယ်ပြောပါတယ်ဆရာ...
ကျွန်တော့်ချစ်သူအရမ်းကံဆိုးပါတယ်ဆရာ...ကျွန်တော့်ရင်သွေးလေးကော၊ချစ်သူကိုရော safe ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပါအုံးဆရာ...
Ovarian cyst နဲ့ ကိုယ်ဝန်တွဲနေတာဆိုရင် Cyst ကို အသေအခြာ ကြည့်ရမယ်။ ဘယ်လောက် ကြာကတည်းက ရှိနေတာလည်း။ မွေးပြီးအောင် စောင့်ရင် မရဘူးလား။ ဖြေးဖြေး ကြီးတာမျိုးဆိုရင် စောင့်မယ်။ များသောအားဖြင့် ကြီးနှုံး အတော် နှေးပါတယ်။ သားအိမ်နဲ့ မွေးလမ်းကို ဖိနေ-ပိတ်နေသသလား။ မဖိရင်-မပိတ်ရင် မွေးပြီးမှ အဲဒါကို ကုမယ်။ မွေးလမ်းကို ဖိ-ပိတ်နေအုံးတော့ ၉ လကိုယ်ဝန်အထိ သားအိမ်ကိုဖိတာ ခံနိုင်ရင် ခွဲမွေးနိုင်သေးတယ်။ Physical disturbance ရုပ်ပိုင်း-အစိုင်အခဲတခု အနေနဲ့သာ ပြဿနာပေးနေတာပါ။ သူရှိနေလို့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ သန္ခေကို တခြား ရောဂါတွေလို သက်ရောက်မှု၊ ကူးစက်မှု လုံးဝမရှိပါ။ ကျန်းမာ-ချမ်းသာကြပါစေ။